Jaceyl hooyo iyo Nafhurnimo Khaalis ah‘’Hadii aad badbaado, ha ilaawin inaan ku jeclahay” (Qiso Dhab ah). - iftineducation.com
Kadib markii uu woxoogaa nastay dhul gariirkii xooganaa ee 11-kii March ku dhuftay dalka Japan, ayaa waxaa qalabkoodii qaatay samata bixiyayaashii oo guri guri raq iyo ruux uga baarayay hambadii dhul gariirkii laayaanka ahaa.
Intii ay howshu socotey ayay guri burbursan waxay ka heleen maydka haweeney dhalinyar oo ay maydkeeda ka qooraansadeen meel yar oo guriga ka dilaacsaneyd, balse qaabka uu maydkeedu u yaalley ayaa shaama reer iyo af kala taag lahayd.
Waxay u taalley jilba jabsi si u eg sidii qof sujuudaya oo kale, tiiyoo ay labadeeda gacmood ay taageeranayeen ama haysteen walax (object) u dhow oo ay si xoog leh ugu dheganeeyd…..deeto gurigii dumayay ayaa kusoo dul dhacay dhabarkeeda iyo madaxeeda.
Caqabado iyo dhibaatooyin badan kadib ninkii hogaanka u ahaa unugtan samata bixinta ka shaqeeyneysey ayaa gacanta la galay dusin yar si uu u taabto qofkan haweenka ah oo uu nolol ka rajeeynayay balse mar hore ayay xijaabatey taasoo uu ka qiyaastay jirkeeda oo aad u qaboobaa isla markaana aad u adkaaday.
Ninkii iyo intii kaloo la socoteyba way iskaga dhaqaajiyeen gurigii si ay u eegaan guriga burbursan ee xiga. Balse si uunbaa wax usoo khasbeen hogaankii kooxda isagoo dib ugu soo laabtay gurigii haweeyneyda dhinsani taalley……
Wuu jilba jabsaday isagoo adeegsadey agabkii uu haystey si uu u helo dululaati (Space) uu ku gaari karo gabadha dhinsan. Nasiib wanaag wuxuu isla markiiba wuxuu la qayliyay xiiso iyo farxad ‘’CUNUG! CUNUG BAA KUJIRA!’’.
Dabeeto kooxdii oo dhan baa how soo tiri oo u wada howlgashay si taxadar kujiro iyagoo wixii ku tuulnaa ka qaadaya maydka gabadha rawaxday. Saa waxaa kujira ilme yar oo 3 bilood dhallan oo ku duuban buste ilmood qurux badan oo uu dusha ubax uga sawiran yahay kaasoo ku hoos jira maydka hooyada.
Sida cad hooyadani waxay sameeysay nafhurnimo (sacrifice) aan wax loo dhigaa jirin si ay u badbaadiso ilmeheeda hadii xitaa ay taasi ka dhigan tahay dhimashadeeda. Waayo markii uu gurigu soo dhacayay waxay sida muuqata jirkeeda u adeegsatey inay ku dahaarto oo ku daboosho wiilkeedan yar oo ay sidii wax sujuudsan ugu rukuubsatay si ay u ilaaliso. Iyadoo ay cajiib ahayd in wiilkan uu si nabad ah iskaga quurinayay markii uu imanayay hogaanka kooxda badbaadadu.
Waxaa markiiba madasha si deg deg ah u yimid dhakhtar si loo baaro xaaladda caafimaad ee ilmaha yar. Balse markii uu furay buste-ilmoodkii uu ku duuduubnaa muluqu wuxuu ka dhex helay telefoon gacmeed (Mobile) bustaha ku dhex jira. Waxaana ku qornaa fariin qoraaleed saarneyd shaashadda telefoonka taasoo u dhigneeyd sidatan: ‘’HADII AAD BADBAADO, WAA INAAD XUSUUSNAANTAA INAAN KU JECLAHAY.’’
Telefoon gacmeedkii baa deeto la isugu dhiidhiibey sidii qaado bun ah, iyadoo qof kasta oo aqriya fariinta ku qoran shaashadda telefoonku uu ooyin kal iyo laab ah la dhacaayay. : ‘’HADII AAD BADBAADO, WAA INAAD XUSUUSNAANTAA INAAN KU JECLAHAY.’’ Tanoo kale waxay uun ka iman kartaa dunida jaceylka xuduud iyo shuruud la’aanta ah ee ay hooyo u qabto ilmeheeda.
Anna waxay dhacdadan dareenka xambaarsani i xusuusisay tudco ka mid ahaa heestii halku dhegeedu ahaa HOOYO ee uu sameeyey Abwaan culus Hadraawi balse uu ku luuqeeynayay Maxamed Saleebaan oo dhadhankeedu ahaa ”OOYOOY LA’AANTAA ADUUNYADU HUBAASHII HALIS KAMA BAXDEENOO”
INTAAD HANAD XAMBAARTEE.
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan) Qeybtii 9-aad